BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Soomaali Libya ku xiran
Soomaali Libya ku xiran
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 17 Luulyo, 2012, 16:37 GMT 19:37 SGA
Wareysi ku saabsan xaaladda gabdho Soomaaliyeed oo ku xiran xero ciidan oo ku taal magaalada Misrata ee waddanka LIbya.
Boqolaal Soomaali ah ayaa ku xirxiran dalka Libya, oo qaarkood ku xiran xabsi ku yaalla magaalada Mesrati oo ay hadda gacanta ku hayso koox aan toos dowladda u hoos tagin.
Arrintan ayaa soo baxaysa maalin kadib markii hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Righta Watch ay sheegtay in kumanaan taageerayaashii Qaddaafi ah ay u xiran yihiin maleeshiyooyin gaar ah oo xadgudub kula kaca.
Hadaba, gabdho Soomaali ah oo ku xiran xero ciidan oo ku taalla magaalada Mesrata ayaa BBC la soo xiriiray, iyagoo ka cabanaya sida loola dhaqmo iyo in ay iska xiran yihiin.
Weriyaha BBC Maxamed Ibraahim Macalimuu, ayaa telefoonka kula xiriiray oo ka waraystay xaaladdooda.